हिजो नारायणहिटीबाट नागार्जुन जान हुने, आज बालुवाटारबाट बालकोट फर्कन नहुने ?
- नारायण वाग्ले
हामीले काठमाडौं सभ्यताको कालो माटो आफ्नो निधारमा पोतिसकेका छौँ । त्यो नागरिक चेतनासहितको नागरिक आन्दोलन आज उठेको छ । यो हरेक प्रतिगमनविरुद्ध आन्दोलित हुनेछ ।
पहिलो जनआन्दोलनमा लोकतन्त्र जिन्दावाद भन्ने हामी नै होइन ? दोस्रो जनआन्दोलन पनि फेरि त्यही नारा किन लगाउनुपर्‍यो ? दोस्रो जनआन्दोलन त्यही नारा लगाएर पुगेन, त्यही नारा फेरि मधेसीहरूले लगाएर किन जनआन्दोलन गर्नुपर्‍यो ? किन दलितहरू उफ्रिनुपर्‍यो ? जनजातिहरू फेरि किन आन्दोलित हुनुपर्‍यो ?
त्यस कारण आज हामी यहाँ उभिएका छौँ । म अरु आन्दोलन जोड्न चाहन्नँ, अहिले बालुवाटारमा हामी किन छौँ भनेर म एउटा कुरा भन्छु । बालुवाटारमा आज जो साथी हुनुहुन्छ, जनताको प्रतिनिधित्व गर्दै उहाँले के गर्नुभयो भने लोकतन्त्र भनेको नियन्त्रण र सन्तुलन हो तर त्यसलाई भत्काउन महत्त्वपूर्ण एजेन्सीहरू आफू (प्रधानमन्त्री) मातहत लानुभयो ।
तर, त्यो प्रधानमन्त्री जो कहिल्यै पनि सिंहदरबार जाँदैन । त्यो प्रधानमन्त्री जहिले पनि निजी निवासमा बस्छ । निजी निवासमा नेपालको स्वतन्त्र न्यायालयको प्रमुखलाई दर्शनभेट दिनलाई बाध्य बनाउँछ । निजी निवासमा प्रतिपक्षको नेतालाई भागशान्ति भन्नलाई बोलाउँछ । त्यस कारण, यो प्रतिगमन सम्भव भएको छ ।
यो प्रगितमन कसरी सुरु भयो भने जुन दिन प्रधानमन्त्रीले सम्पूर्ण जनआन्दोलनलाई अभिव्यक्ति दिँदादिँदा घात गर्ने गरी कुनै पनि परिवर्तनको कुरा नमान्दा नमान्दै पनि शासकीय शक्ति सन्तुलनसमेत खलबल्याएर बालुवाटारलाई श्री ३ जंगबहादुरको जस्तो निजी निवास बनाए । यो प्रतिगमन त्यहाँबाट सुरु भयो ।
उनका मान्छेहरूले भन्दै छन्- प्रधानमन्त्रीविरुद्ध धेरै ठूलो षड्यन्त्र भइरहेको थियो । के षड्यन्त्र भएको रहेछ भने अविश्वासको प्रस्ताव आउँदै थियो रे । अविश्वासको प्रस्ताव आउँछ भन्ने डरले संसद नै भंग गरिदिने ? अनि के भन्छन् भने- अविश्वास प्रस्ताव आउने मात्रै होइन, उहाँलाई त खाली खुट्टा नै बालकोट हिँडाउनेवाला थिए, बालकोट फर्काउनेवाला थिए रे । खाली खुट्टा हातमा चप्पल लिएर दौडिएका नेपाली जनताले ल्याएको लोकतन्त्र हो कि होइन ? उनले खाली खुट्टा हिँड्न नहुने ?
अर्को कुरा, हिजो नारायणहिटीबाट नागार्जुन जान हुने ? आज बालुवाटारबाट बालकोट फर्कन नहुने ? त्यस कारण उनको अहम्‌को श्रीपेच फुकालेरै छोड्नका लागि नागरिक आन्दोलन जुर्मुराएको छ । जो बालुवाटारमा बसेका छन्, यिनीहरूले पहिले मन्दिर बनाउँछु भन्दै हिँडे, अब पूजा आरती गर्दै हिँड्दै छन् । तिनीहरूले संविधान पढेकै छैनन् । संविधानमा के लेखेको छ ? संविधानमा लेखेको छ- धर्मनिरपेक्षता । यिनीहरूले खलबल्याउन खोजेकै संघीयता, धर्मनिपेक्षता, समानुपातिक प्रतिनिधित्वसहितको लोकतन्त्र नै हो । त्यस कारण उनी मन्दिर-मन्दिर जाऊन् ।
माघ सहिदहरूको महिना हो । ०९७ सालका सहिदहरूलाई सम्झनलाई नागरिक आन्दोलनले अबको कार्यक्रम सहिदको कार्यक्रम गर्नेछ । सहिदहरूलाई जहाँ झुण्डयाइएको थियो, हामी त्यहीँ गएर समर्पण गर्नेछौँ ।
-संसद विघटनको विरोधमा सोमबार नागरिक आन्दोलनले बालुवाटारमा गरेको विरोध प्रदर्शन कार्यक्रममा वाग्लेले व्यक्त गरेको विचार ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, माघ १२, २०७७, १७:१२:००